Arts & Humanities » တောင်ပေါ်လမ်း…ကားလေးနဲ့…လှမ်းကာလေ…..	38
နတ်ရှင်နောင်ရရင် လည်း မစားသာ။ ဒါ အတိတ်လမ်းနဲ့ ပျိုးတာပေါ့။
Kaung Kin Pyar says: ဟီး…အကျန်တော့ဝူးးးး
ဦးကျောက်ခဲ says: ဦးကျောက်စ်တို့ Final Year ကွင်းဆင်းတော့ အောင်ပန်းဟိုဘက် ရွာငံလမ်း…
Kaung Kin Pyar says: အသိုက်ပျက်သွားတယ်…???
အဲ့လမ်းမယ်…မှောက်ပြီဆို…လျှောကနဲပဲတဲ့…. အနက်ရောင်မ၀တ်ရဘူးတို့…အပြောအဆို ဆင်ခြင်ရတယ်တို့…ဘာတို့…
တိမ်မည်း says: ကံကောင်းလို့ မသေတယ်…
ဖိနပ်တော့ သတိရသားနော်…. လူတွေက ပျော်ရင် ဒဏ်ရာတွေမေ့ပျောက်တယ်တဲ့….
Kaung Kin Pyar says: ဒဏ်ရာက…ဆောင်းတွင်းဘက်လိုတို့..အမှီမပါဘဲ..အကြာကြီးထိုင်ရင်တို့ဆို…ခုထိ…သိသာသေးတာ…
Alinn Z says: ”လူဆိုတာ လင်းဝေစိမ်းမြတဲ့ ပန်းညများစွာထက်
ခင်ဇော် says: “မီးတောက်ရမ်သမ်”
အရောဝင်လို့ မကောင်းတဲ့ ခွေးကလေးပါပဲ….။ လောကဓံဦးတုန်းက
…အားလုံး ပြီးဆုံးသွားပါပြီ…´ တဲ့။ (၂)
အနက်ရှိုင်းဆုံး ထိုးကျပစ်လိုက်တယ်။ ထူးလှတယ်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူးလေ…
. . . . . . . . . . . . ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် …
နင်..ဘုရင်မ.. လာမလုပ်ရဘူးနော်။ တော်တော်ကြာ
ကာလများစွာ… ကြာပြီကောလေ…။ (၆)
မင်း… ငါ့ကို မေ့သွားမှာပါ…။ ခုတော့……….. သွားတော့နော်….။ ငါ… ချစ်မြတ်ရတဲ့ နေရောင်ခြည်တွေနဲ့ မိန်းမပျိုကို
Kaung Kin Pyar says: စိမ်းလိုက်ပါတယ်..မမဂျီး….
Alinn Z says: မီးတောက် ရစ်သမ်. . .
Kaung Kin Pyar says: နာလဲ ကြားဖူးတယ်….။ တာရာမင်းဝေတော့ မဟုတ်ဘူး..ထင့်…
ခင်ခ says: မသေကောင်း မပျောက်ကောင်းဟယ်
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ် လေးခ….
Ma Ei says: ကံကောင်းပေလို့နော်…
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ်…မွအိ…
Crystalline says: ကင်းကောင်လေးအချောဆုံး… ဒဏ်ဖြစ်သွားတာနော်… သေချာပြန်စစ်သင့်တယ်…
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ် မခွစ်…ဒဏ်ဖြစ်သွားတာ….
အောင် မိုးသူ says: အမှတ်တရနော် ကျတော်ကတော့ ထားဝယ်အသွား မော်လမြိုင်ဘက်ကနေ ဟိုဘက်ကိုအကူး အဲ့တုန်းက တံတားမဆောက်ရသေးဘူး။ ရေမနစ်ရုံတမယ်ဖြစ်ခဲ့တာ မှတ်မိသေးတယ်။
Kaung Kin Pyar says: ပိုစ့်တင်ပါအူးးးးး
Mr. MarGa says: အလောင်းတော်ကဿပ…….
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ်…အမဲရောင် မ၀တ်ရဘူးတို့ဘာတို့….
naywoon ni says: ​ကောင်းကင်​ပြာရယ်​ မထိတ်​သာ မလန့်​သာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဟီးးးး အိုက်လိုပါဆို ဆရာနေရဲ့
ဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ခဲ့တာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ကျုပ်လည်း မေမြို့က အဆင်းလမ်းမှာအက်ဆီးဒင့် ဖြစ်ဖူးတယ်
.တောင်ပေါ်ခရီးသွားတိုင်းအလိုလိုသတိရတတ်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: တော်ပါသေးရဲ့ ဦးမိုက်ရယ် ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်တာ။ ကောင်းကင်ပြာတို့ကားလဲ ပစ္စည်းတွေသိပ်မပါလို့သာ တော်တာ။ တောင်ပေါ်တက်တော့ mini bus နဲ့ပြောင်းပြီးတက်ကြတော့လေ…
manawphyulay says: အမယ်လေး လန့်စရာပဲ ကောင်းကင်ပြာရယ်။ စိတ်တော့ အတော်ဝင်စားသား။ အဲဒီဘက်ကို မရောက်ဖူးသေးဘူး။ သွားချင်လိုက်တာ အရမ်းပဲ ခုတော့ မသွားနိုင်သေးပါဘူး။
Kaung Kin Pyar says: ရာသီဥတုလေးအေးလို့ နေလို့ကောင်းတယ် မမနောရဲ့။ သဘာဝအလှတွေလဲ အရမ်းလှပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေဆိုလဲ လှလိုက်တာ လှလိုက်တာနဲ့ အော်နေရရော။
မြစပဲရိုး says: ကင်းကောင်လေး ပျောက်နေတာ လမ်းသလား နေတာကိုး။
Kaung Kin Pyar says: အဟီးးးး ဟုတ်တယ်အရီးရေ……တောင်ကြီးသွားရင်း အလောင်းတော်ကဿ ပရောက်သွားတာရယ်။
lamin ngel says: စာကောင်းကောင်းမရေးတတ်ပေမဲ့ အရေးအသားလေးကောင်းလို့ ဖတ်သွားပါတယ်။တာရာ့ကဗျာလေးတွေကိုပါအစစ်ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။ ကဗျာဆိုအရမ်းချစ်တယ်။ငယ်ငယ်ထဲကချစ်ခဲ့သဘောကျခဲ့ရတဲ့တာရာ့ကဗျာအတွေအတွက်ထပ်ဆင့်ကျေးဇူးပါ။ကောင်းကင်ပြာ့စာတွေလဲအမြဲအားပေးနေပါ့မယ်
မြစပဲရိုး says: စာဝင်ဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားတဲ့ လမင်းငယ် ကိုလဲ ကျေးဇူးပါ။
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်ကဲ့ လမင်းငယ်
Wow says: အေးလေ.. ဖိနပ်ကအရေးကြီးတာပေါ့ လူကမသေ၀ူးပဲဟာ..ဖိနပ်မပါ ဘီလိုလမ်းဆက်လျောက်မလဲ.. ကင်းကြောင်လေးက အဓိကနဲ့ သာမညကိုခွဲသိတာပေါ့…. ချွိရှာပေးတဲ့ တာရာမင်းဝေကဗျာလေးလဲ.. ကြိုက်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ်…ဟုတ်တယ်…
မ၀ါးပဲ နားလည်မှုရှိတယ်…. ဖိနပ်က လိုတယ်လေ..နော်..
lamin ngel says: ခုလိုနွေးနွေးထွေးထွေးဖိတ်ခေါ်တာကျေးဇူးနော်။လွမ်းတိုင်းကဗျာလေးတွေလိုက်ရှာဖတ်ချင်တယ်
ခင်ဇော် says: ဘယ်ဒူလားးး
ဦးကြောင်ကြီး says: ကားမှောက်တုံးက ကင်းကောင်လေး ဇောက်ထိုးဂျီးဆိုတော့ အဲဒုံးဂ စကပ်ဝတ်ထားလျင် ပေါင်ကြီးပေါ်နေမှာပဲနော်… တွေးကြည့်ရင်း အယသာရှိလိုက်ထှာ….။
Kaung Kin Pyar says: နှူးဘာအောင်ကြူး…..